जनरल इन्स्योरेन्सकाे साधारण सभा सम्पन्न – Weekly Nepal
जनरल इन्स्योरेन्सकाे साधारण सभा सम्पन्न
in प्रदेश २ — ३० श्रावण २०७६, बिहीबार ०७:०७
काठमाडौँ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लि.को प्रथम बार्षिक साधारण सभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको संचालक समितिका अध्यक्ष कुनाल कयालको अध्यक्षतामा एलिस रिसेप्सन, गैरिधारा, काठमाण्डौमा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो । सुदूर पश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तथा कम्पनीका संस्थापक अध्यक्ष झपटबहादुर बोहराले साधारण सभा उद्घाटन गरेका हुन् ।
बीमा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति तथा विभिन्न चुनौतीहरुको बाबजुदपनि कम्पनीले आब २०७४÷०७५ को करिब २४ कार्यदिनमा कम्पनीले १९३ बीमालेख जारी गरि रु. ३१,६९,८९१/४० बीमाशुल्क संकलन गर्न सफल भएको बताइयो । सो अनुरुप आव २०७५/०७६ मा कम्पनीले जम्मा ३१,२१७ बीमालेख जारी गरि रु. ३३,२४६१,४१२३/– बीमा शुल्क संकलन गर्न सफल भएको जनाएको छ ।
आव २०७५/०७६ मा जम्मा दाबी संख्या ७३८ परेको मध्ये जम्मा दाबी संख्या ५०८ को रकम रु. ४३,७५,०००/– भुक्तान गरिएको छ ।
कम्पनीको बार्षिक साधारण सभाले जारी पुँजी अन्तर्गत सर्वसाधारण समूहका लागि छुट्याइएको ३०% दरले हुने जम्मा ३०,००,००,०००/– (तीस करोड) को सेयर संख्या ३०,००,००० कित्ता आईपिओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।